Wararka Maanta: Talaado, May 7 , 2013-Sawiro shirkii maanta ka furmay magaalada London
Wararka Maanta- Talaado, May 7 , 2013
Sawiro shirkii maanta ka furmay magaalada London
Halkaan ka daawo sawiro laga soo qaaday shirka maanta ka furmay magaalada London ee dalka Britain.
Sawirada: British Foreign and Commonwealth Office
5/7/2013 2:51 PM EST
Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay dhimashada Afar Ruux oo Daad uu ku Qaaday inta u dhexeysa Hargeysa iyo Berbera
5/7/2013 12:31 PM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siillaanyo ayaa ka hadlay geerida afar qof oo daad uu ku qaaday dooxa Dacar-buluq ee u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, isagoo tacsi u diray ehellada iyo qoysaskii afartaas marxuum.
Ra’iisul Wasaaraha Somalia iyo Xubno Wasiirro ah oo ka Qayb-Galay Dibad-bax lagu Taageerayay Shirka London (SAWIRRO)
5/7/2013 11:46 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Ra’iisul wasaaraha Somalia, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiiradda, xildhibaanno, guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, saraakiisha ciidanka, fanaaniin iyo marti sharaf kala duwan ayaa maanta ka qayb-galay dibad-bax lagu taageerayo shirka London oo ka dhacay Muqdisho.
5/7/2013 10:38 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Waxaa lasoo gabgabeeyay shirkii London ee looga hadlayay horumarinta Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in goor-dhow ay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh iyo ra’iisul wasaaraha Britain, David Cameron ay saxaafadda u soo bandhigaan warmutiyeedkii shirka kasoo baxay.
Shirka London oo si rasmi ah u furmay iyo Madaxweynaha Somalia oo hadal ka jeediyay Furitaankii Shirkaas (SAWIRRO)
5/7/2013 6:02 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Aqalka Lancaster ee magaalada London ee dalka Britain waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii looga hadlayay horumarinta Soomaaliya; kaasoo ay kasoo qayb-galeen xubno ka socda illaa 58 dowladood iyo hay’ado caalami ah oo ay ka mid yihiin Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay.
MADAXWEYNE XASAN SHEEKH: "Soomaaliya waxay u Baahan tahay Qorshe la mid ah Marshall Plan si ay u soo kabato"
5/7/2013 4:45 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan London ayaa u sheegay wargeys kasoo baxa London oo lagu magacaabo Financial Times ayaa sheegay inay u baahan tahay Soomaaliya qorshe la mid ah kii dib loogu habeeyay Yurub ee Marshall Plan-ka loo yaqaan, si ay uga baxdo faqriga, colaadaha sokeeye iyo argagaxisada.
Qaraxyo Khasaare geystey oo xalay fiidkii ka dhacay saldhigga booliska Miir ee Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo
5/7/2013 4:42 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Koox dabley ah ayaa xalay fiidkii weerar gaadmo ah ku qaaday saldhigga booliska Miir oo ku yaal xaafadda Horumar ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Maamulka Gobolka Bay iyo Al-shabaab oo guulo ka kala sheegtay dagaal ka dhacay Duleedka Degmada Qanshax-dheere
5/7/2013 4:11 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Maamulka gobolka Bay iyo Al-shabaab ayaa guulo ka kala sheegtay dagaal shalay ku dhexmaray duleedka degmada Qansax-dheere ee gobolka Bay, dagaalkaas oo la sheegayo inay ku dhinteen lix qof oo dhinacyadii dagaalamay ka tirsan.
Ciidamada Booliska Somaliland oo baaritaan ku sameeyey guri ay Hargeysa ku leeyihiin Qoyska Amiirka Al shabaab
5/7/2013 3:44 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Ciidanka Booliska Somaliland ayaa Isniintii shalay baaritaan xoogan ku sameeyey guriga ay ku nooshahay hooyada dhashay amiirka Xarakada Al shabaab, Axmed Cabdi Godane oo loo yaqaan Sheekh Mukhtaar C/raxmaan Abuu-Zubeyr oo Hargeysa ku yaalla, iyagoo ku xiray howlgalkaas laba nin oo ay Cabdi Godane walaalo ahaayeen.
Shirka London ee looga Hadlayo Arrimaha Somalia oo Saacadaha soo socda si rasmi ah uga Furmaya Magaalada London
5/7/2013 3:37 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) — Shirka London oo looga hadlayo arrimaha Soomaaiya ayaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socda uu si rasmi ah uga furmo magaalada London ee xarunta Britain, iyadoo haatan ay wafuudda shirka ka qaybgalaysa ku sugan yihiin goobta loogu talogalay inuu ka dhaco.
Dacwad Xasaasi ah oo ku saabsan Xayawaan la isku Haysto oo Maxkamada Deegaanka Gabiley ka socota iyo Kiiska oo fidaya
5/7/2013 3:36 AM EST
Talaado, May 07, 2013 (HOL) —Maxkamadda degmadda Gabiley ayaa loo soo gudbiyey dacwad xasaasiyad dhalisay oo la xidhiidha xayaawaano dad shacab ahi isku haystaan, haseyeeshee arrintii murugtay ka dib markii wasaaradda Deeganka Somaliland oo loo dhiibay ay maxkamaddii u sheegtay in xayawaankii dhinteen.
Video: Opening remarks Somalia Conference May 7, 2013 by Prime minister of Britain and Somali President Hassan Sheikh Mohamud -FCO
5/7/2013 2:59 PM EST
The International Somalia Conference final communiqué. -FCO
5/7/2013 12:37 PM EST
5/7/2013 9:22 AM EST
Prime Minister David Cameron on the Somali Conference
International talks eye peaceful future for Somalia -CNN
5/7/2013 8:43 AM EST
Somalia's struggle for unity far from over -BBC
President Hassan Sheikh Mohamud gave the opening address at the Somali Conference today -FCO
5/7/2013 6:42 AM EST
Cameron Expresses Solidarity at Somalia Rebuilding Conference -VOA
5/7/2013 6:19 AM EST
Maldives included in United Nations’ US$2 million anti-piracy project -Minivian News
5/7/2013 5:43 AM EST
President Mohamud in London for Somalia conference -Daily Nation
5/7/2013 5:35 AM EST
London conference looks to build on Somalia progress -AFP
5/7/2013 5:29 AM EST
Somalia receives super-jab -euronews
5/7/2013 5:06 AM EST
Somalia conference set to open in London -Aljazeera
5/7/2013 4:57 AM EST
London's Somalia conference does not recognise Somaliland – we cannot go -The Guardian
5/7/2013 4:48 AM EST
U.N. urges support for new Somali leaders before donor meet -New Vision
5/7/2013 4:08 AM EST